Dhallinyarada Soomaaliyeed oo loogu baaqay inay ka qeyb qaatan horumarka dalka – Radio Muqdisho
Dhallinyarada Soomaaliyeed oo loogu baaqay inay ka qeyb qaatan horumarka dalka
Wasiiru ka tirsan Xukuumadda Fedaraalka ah ee Soomaaliya ayaa ka qeybgalay kulan looga hadlayey doorka dhallinyarada ee ku aadan horumarka dalka iyo dib u dhiska oo xaly lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha mudane Maxamed Cabdullaahi Xasan “Nuux” Wasiirka Wasaaradda Awqaafta iyo Diinta mudane Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi iyo mas’uuliyiinta ururka dhallinyarada isbadal doonka ah ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan (DHISO) ayaa lagu xusayay 9 sanno guuradii ka soo wareegtay markii la aas aasay ururkaasi.
Gudoomiyaha ururka dhallinyarada isbadal doonka ah ee (DHISO) Cabdulqaadir Maxamed Cali oo ka hadlay kulanka ayaa sheekeeyay waxyaabaha u qabsoomay, isagoo xusay si gaar ah u tilmaamay doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karaan dib u dhiska iyo horumarka dalka.
“Dhallinyarada door weyn ayay ku leeyihiin inay kaqeyb qaataan horumarka dalka, marka waxaan ku baaqayaa in dhallinyarada ay muujiyaan doorkooda” ayuu yiri
Wasiirka Wasaaradda Awqaafta iyo Diinta ee Xukuumadda Soomaaliya Mudane Cabdulqadir Sheekh Cali “Baqdaadi’ ayaa sheegay in dhallinayaradu ay kaalinta ugu muhiimsan ka qaadan karan horumarka dalka hadii ay isku duubnaadaan.
“Waxaan maanta ku faraxsanahay in Soomaalida ay 70% xilligan u badanyihiin dhalinyarado da’doodu ka yartahay 30 sano jir, waxaana awoodda uu dal waliba leeyahay” ayuu yiri Wasiirka Awqaafta.
Wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha ee xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Xasan “Nuux” oo gaba gabadii ka hadlay kulanka ayaa kula dardaarmay dhallinyarada Soomaaliyeed inay garab istaagaan Wasaaradda, ayna ka shaqeyn doonaan sidii dhallinyarada shaqo abuur loogu sameyn lahaa gudaha dalka.
“Waxaad ogtihiin in ay nagu soo fool leedahay xuska maalinta Dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15-ka May, marka waxaa la idinka rabaa inaad door muuqdo ka qaadataan xuska munaasabadaasi, idinkuna waxaan idin leeyahay hambalyo” ayuu yiri Wasiirka Dhallinyarada iyo Isboortiga.
Maamulka Gobolka Shabeelaha dhexe oo ku baaqay in laga caawiyo sidii biyo xireen loo sameyn lahaa